Na -edepụta usoro iji chebe mwakpo
Kọmịshọn na Nkwukọrịta Naịjirịa (NCC) na-achọ ime ka ọtụtụ nde ndị na-azụ ahịa telecom Naijiria mara maka ịdị adị nke ọhụrụ, nnukwu ihe egwu na nke na-emebi emebi, Malware akpọrọ Flubot.
malware bụ mkpụrụokwu a na-eji akọwa nje ma ọ bụ sọftụwia, emebere ya ka ọ “gbabie, mebie, ma ọ bụ nweta ohere na-enweghị ikike na sistemụ kọmputa.”
Dịka ozi enwetara taa, Ọktoba 21, 2021, site na Nigeria Kọmputa Azịza Mberede Mberede (ngCERT), Flubot "eji nkwalite nchekwa adịgboroja na nrụnye ngwa na-eche Androids".
ngCERT kwuputara na Flubot "na-eme ka ngwa ụlọ akụ ekwentị gam akporo na-ese ihe nlele weebụ adịgboroja na ngwa ezubere iche" yana ebumnuche ya karịrị izu ohi data nkeonwe yana ebumnuche izu ohi nkọwa kaadị kredit ma ọ bụ nzere ụlọ akụ n'ịntanetị.
A na-ekesa FluBot site na Short Message Service (SMS) ma nwee ike snoop "na ọkwa na-abata, malite oku, gụọ ma ọ bụ dee SMS, ma bufee ndepụta kọntaktị onye ahụ na ya.
Nke a malware na -awakpo ngwaọrụ gam akporo site n'ime ka à ga -asị na ọ bụ "FedEx, DHL, Correos, na ngwa Chrome" ma na -amanye ndị ọrụ na -atụghị anya ka ha gbanwee nhazi nnweta na ngwaọrụ ha iji wee nwee ọnụnọ na -aga n'ihu na ngwaọrụ.
Ọhụrụ malware na-emebi nchekwa nke ngwaọrụ site na iṅomi ihuenyo nbanye adịgboroja nke ụlọ akụ ndị a ma ama, na ozugbo ndị ọrụ tinye nkọwa nbanye ha na ibe adịgboroja, a na-egbute data ha ma bufee ya na ebe njikwa ndị na-ahụ maka malware site na ebe a na-erigbu data ahụ. site na igbochi paswọọdụ otu oge (OTPs) metụtara ụlọ akụ na dochie ngwa SMS ndabara na ngwaọrụ gam akporo ezubere iche.
N'ihi ya, ọ na-echekwa nnabata n'ime ngwaọrụ site na SMS wee gaa n'ihu na-ebufe ozi yiri ya na kọntaktị ndị ọzọ nwere ike dị na ngwaọrụ ọ wakporo na-adọta ha n'ime nbudata ngwa adịgboroja ahụ.
O zuru ezu ikwu na, mgbe Flubot na-emerụ ngwaọrụ, ọ nwere ike ịkpata mfu ego na-enweghị atụ.
Na mgbakwunye, malware na-emepụta ọnụ ụzọ azụ nke na-enye ohere ịnweta ngwaọrụ onye ọrụ, si otú a na-enyere onye mwakpo ma ọ bụ onye mwakpo aka ime omume mpụ ndị ọzọ, gụnyere ịmalite ụdịdị malware ndị ọzọ.
N'ihi nchọpụta a na nghọta nke usoro malware a si arụ ọrụ, yana iji chebe ọtụtụ nde ndị na-azụ ahịa telecom ma gbochie ndị agha mpụ, n'agbanyeghị ebe ha nọ, site na iji usoro mgbasa ozi na-eme aghụghọ na mmebi enweghị ike ịgbapụta, NCC na-achọ ugbu a. kwughachi ndụmọdụ nke ngCERT dị ka ndị a:
Apịla na njikọ ahụ ma ọ bụrụ na ị nwetara ozi ederede na-enyo enyo, na etinyekwala ngwa ọ bụla ma ọ bụ melite ibe na-arịọ gị ka ịwụnye.
Jiri ngwa antivirus emelitere nke na-achọpụta ma gbochie nje malware
Tinye mmachi dị mkpa na sistemụ na ngwa
Jiri okwuntughe siri ike ma mee ka nyocha ihe abụọ (2FA) karịa nbanye
Na-echekwa data gị mgbe niile
Ọ bụrụ na mgbasa ozi a metụtara gị, ịkwesịrị ịtọgharịa ngwaọrụ gị na ọnọdụ nrụpụta ozugbo enwere ike. Nke a ga-ehichapụ data ọ bụla na ekwentị gị, gụnyere data nkeonwe
Eweghachitela site na nkwado ndabere emere mgbe ị wụnye ngwa. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ngCERT na merenụ[na]cert.gov.ng maka enyemaka akaaka.
Ị ga-achọkwa ịgbanwe okwuntughe na akaụntụ ịntanetị gị niile, na ngwa ngwa, gburugburu akaụntụ ụlọ akụ gị n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu na ndị na -enweghị ikike nwere ike nweta akaụntụ gị, kpọtụrụ ụlọ akụ gị ozugbo.
Ka Commission na -agbasi mbọ ike n'ịhụ na ịbawanye ohere brọdband, na -enyere ndị na -ere telecom aka ịrụ ọrụ ha nke ọma na ntanetị nke ọma, ọ na -ekwughachi nkwa ya inye ndị na -azụ ahịa ike site na ozi bara uru na agụmakwụkwọ iji chebe ha pụọ ​​n'aka ndị ụdị cyber niile dara. -mwakpo mgbe ịntanetị.
Nke a na-akọwa ebumnuche maka mmalite nke ụlọ ọrụ telecom's Center for Computer Security Response nke NCC na 30th Septemba 2021.